नाडा अटो शोमा गाडी किन्ने... :: सुजिता कार्की :: Setopati
नाडा अटो शोमा गाडी किन्ने हो ? यस्ता छन्, आकर्षक अफरहरू
अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल एवं ग्लोबल एक्सपोजिशन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त अायोजनामा मङ्गलबारबाट जारी १२ औँ नाडा अटो मेलामा गाडी किन्ने तथा जानकारी लिनेहरूको आकर्षण देखिएको छ।
त्यसैले पनि कम्पनीहरूबीच सवारी साधनको खरीदमा विभिन्न छूट, बम्पर उपहार लगायतका अफर दिएर ग्राहक आकर्षित गर्नेको होडबाजी नै चलेको छ। मेलामा सहभागी अधिकांशले कम्पनीहरूले सडक कर तथा बीमा रकम छूटदेखि बम्पर उपहारसम्मको व्यवस्था गरेका छन्।
कुन कम्पनीले कति दिएका छन् त छूट?
फक्सवागेनले नाडा अटो शोमा आफ्ना विभिन्न मोडलका गाडीहरूमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको छूटको व्यवस्था गरेको छ जसअन्तरगत:
पोलो ट्रेन्डलाइनः २७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको यस गाडीमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँको छूटको अफर दिइएको छ।
पोलो कमफर्टलाइनः यस गाडीको मूल्य ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ भने मेला अवधिभर खरीद गर्दा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँको छूट अफर दिइएको छ।
क्रस पोलोः यस गाडीको मूल्य ३६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ भने मेला अवधिभर खरीद गर्दा २ लाख २५ हजार रुपैयाँको छूट अफर दिइएको छ।
भेन्टोः यो मोडलका फक्सवागेनका गाडीमा ३६ लाख ९५ हजार रुपैयाँदेखि ४६ लाख ९५ हजार रुपैयाँसम्मका गाडीहरू उपलब्ध छन्। हरेक मोडलमा कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको छूट अफर दिएको छ।
टिक्वानः यस मोडल अन्तरगत ९९ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड १७ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य रेञ्ज भएका गाडीहरू छन्। हरेक मोडलमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँको छूट अफर दिएको छ।
अमारोकः यो मोडलका फक्सवागेनका गाडीमा ८२ लाख रुपैयाँदेखि ९२ लाख रुपैयाँसम्मका गाडीहरू उपलब्ध छन्। हरेक मोडलमा कम्पनीले ६ लाख रुपैयाँको छूट अफर दिएको छ।
पासाटः यस मोडलको गाडीको मूल्य १ करोड १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। उक्त गाडीको खरीदमा ८ लाख रुपैयाँको छूटको व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ।
यो बाहेक कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेञ्ज अफर प्रदान गरेको छ।
कम्पनीले यस ब्राण्ड अन्तरगतका विभिन्न मोडलका गाडीको खरीदमा आकर्षक छूटको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तरगत :
सिटीः यस मोडलका विभिन्न ७ वटा गाडीहरू उपलब्ध छन्। ३७ लाख ७५ हजार रुपैयाँदेखि ५३ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य रेञ्ज भएका यी गाडीको खरीदमा कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको छूट प्रदान गरेको छ।
बिआरभीः यस मोडलका ५ वटा गाडी उपलब्ध छन्। ४१ लाख रुपैयाँदेखि ५४ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य रेञ्ज भएका यी गाडीको खरीदमा कम्पनीले २ लाख रुपैयाँको छूट प्रदान गरेको छ।
सिभिकः यस मोडलका गाडीको मूल्य ६८ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ। यी गाडीको खरीदमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको छूट दिइएको छ।
यस बाहेक होण्डाले आफ्ना गाडीहरूको खरीदमा ग्रीन स्टीकर, बीमा, १ वर्षको सडक कर नि:शुल्क रूपमा प्रदान गरेको छ।
मेला अवधिभर कम्पनीले ७५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिएको छ । जसअन्तरगत:
यस मोडलको गाडीको मूल्य १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसको खरीदमा १ लाख २५ हजारको छूट दिइएको छ।
रेडी­गो टी ‘ओ’
यस मोडलको गाडीको मूल्य १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसको खरीदमा ७५ हजार रुपैयाँको छूट दिइएको छ।
रेडी­गो टी ‘एस’
यस मोडलको गाडीको मूल्य १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसको खरीदमा ७५ हजार रुपैयाँको छूट दिइएको छ।
त्यस्तै, यी तीनै गाडीको खरीदमा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्क्रयाच कुपन प्राप्त गर्न सकिनेछ। यस बाहेक एक वर्षको बीमा, २५ हजारको एक्सचेन्ज बोनस, १९ हजार बराबरको रोड् ट्याक्स तथा नामसारी, ३ वर्षको नि:शुल्क सर्भिस र वारेण्टी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
रेनोको आधिकारिक विक्रेता एडभान्स अटोमोबिल प्रालिले नाडा शोको अवसरमा उत्सव अफर ‘रेनो डबल उत्सव’ नामको योजना ल्याएको छ।
यो अवसरमा रेनो कार खरीद गर्दा ग्राहकहरूले सिधै ३ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छूट प्राप्त गर्न सक्ने र स्क्रयाच कुपनमार्फत थप ३ लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
त्यस्तै, रेनो कार खरीदमा १ वर्षसम्मको नि:शुल्क इन्धन, १ वर्षसम्म नि:शुल्क सडक कर, स्पट फाइनान्सिङको सुविधा, ५ वर्षको वारेण्टी र एक्सचेञ्ज सुविधा पनि रहेको छ। यो अफर रेनोको लजी, डस्टर र क्विडको ३ वटै मोडलका कारहरूको खरीदमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ।
सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटो कर्पले ‘पर्वोत्सव’ योजनाअन्तर्गत ‘डवल मज्जा’ अफर ल्याएको छ।
कम्पनीका अनुसार ‘डबल मज्जा’ अफर अन्तर्गत ६ लाख रुपैयाँसम्म नगद छूट, ५० हजार रुपैयाँसम्म सटही बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त स्क्रयाच कुपन, २ वर्षसम्मका लागि नि:शुल्क बीमा सुविधा, सडक कर र रजिष्ट्रेशन नि:शुल्क उपलब्ध गराइने छ।
२०१६ का सम्पूर्ण मोडलहरूमा विशेष छूट समेत दिइने कम्पनीको भनाइ छ।
नेपालका लागि टाटा मोटर्सको अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले पनि छूट योजना ल्याएको छ। ‘दशैंमा १० सै तोला सुन’ नाम दिइएको यो योजनामा ग्राहकले कार किन्दा १० तोलासम्म सुन पाउने कम्पनीले जनाएको छ।
टाटा स्ट्रोम, बोल्ट, टियागो र जेस्ट किन्ने ग्राहकलाई क्रमशः १० तोला, ७ तोला, ६ तोला र ५ तोला पक्का सुन उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता ‘गो अटोमोवाइल्स’ ले नाडा अटोमेला तथा चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी क्यासमा क्यास अफर दिएको छ।
यस योजना अन्तर्गत फोर्ड गाडीको खरीदमा नियमित क्यास छूटका साथै लक्की ड्र मार्फत नगद ८० हजार रुपैयाँदेखि चार लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त नगद छूट पाउने कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार बुकिङ्गमा ग्राहकले एउटा यूनिक कोड प्राप्त गर्नेछन् र उक्त कोड कम्प्युटर प्रोग्राम मार्फत अतिरिक्त छूट हुनेछ।
किया मोटर्स कण्टिनेण्टलले आफ्ना गाडीहरूको खरीदमा नाडा अटोमेला लक्षित गरी विभिन्न अफरहरू दिएको छ । जसअन्तरगत :
रियो र पिकाण्टो
यी दुई डलमा मोडलका गाडीको खरीदमा ५ वर्षसम्म नि:शुल्क स्पेयर पार्टस तथा सर्भिस, एक वर्षको बीमा, १ वर्षको सडक कर, तीन वर्षसम्म लक्की ड्र मार्फत बम्पर पुरस्कार, दुई जनालाई ७ दिन ६ रात मेलेसिया र इण्डोनेसियाको भम्रण तथा किनेको ५ वर्ष भित्र साट्दा ७५ प्रतिशत भ्यालूको व्यवस्था गरेको छ।
स्पोर्टेज र सोरेण्टो
यी दुई मोडलका गाडी नाडा अटो मेला अवधिभर खरीद गर्दा ५ वर्षसम्म नि:श'ल्क स्पेयर पार्टस तथा सर्भिस, एक वर्षको बीमा, १ वर्षको सडक कर, तीन वर्षसम्म ‘लक्की ड्र’ मार्फत बम्पर पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ।
सुबारु ब्राण्डका गाडीहरू नाडा अटो मेलाभर खरीद गर्दा कम्पनीले ६ लाख रुपैयाँको नगद छूट दिएको छ।
मारुती सुजुकीले पनि नाडा मेलालाई लक्षित गरी अफरहरू ल्याएको छ । विभिन्न मोडलका गाडीहरूमा ६० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको नगद छूट दिइएको छ।
त्यस्तै, नगद छूट बाहेक नाडा स्पेशल बोनस बापत १० हजार रुपैयाँ र सडक कर बापत १९ हजार रुपैयाँ छूट तथा स्क्रयाच कार्ड मार्फत १ लाख रुपैयाँको छूट प्राप्त गर्न सकिने समेत जानकारी दिइएको छ।
महिन्द्राले आधिकारिक विक्रेता अग्नि इन्करपोरेटेड प्रालिले नाडा अटो मेलामा कम्पनीका गाडीको खरीदमा स्क्रायाच कार्ड मार्फत १ तोलासम्म सुन तथा महिन्द्रा गस्टो जित्ने अवसर दिएको छ। त्यस्तै, बम्पर अफर मार्फत इ २० तथा एक्सयुभी ५०० जित्न सकिनेछ।
बम्पर अफर बाहेक नाडा अटो मेला अवधिभर महिन्द्राको जुनसुकै शोरुमबाट गाडी किन्दा इ२० र गस्टो १२५ जित्ने मौका समेत दिइएको कम्पनीले जनाएको छ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले पनि नाडा अटो शो लक्षित गर्दै हुण्डाई फेस्टिभल डिलाइट योजना ल्याएको छ।यस योजनामा ग्राहकले नगद ५ लाख सम्मको छुट र १ वर्षे निःशुल्क बीमा सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ।
स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप १ लाख सम्मको नगद छुट साथै लक्की–ड्र मार्फत १०० जनालाई १०–१० ग्राम सुन, १० जोडीलाई दुबई भ्रमण र बम्पर उपहार अन्तर्गत एक थान हुन्डाई इलाईट आई २० तथा एक थान हुन्डाई एक्ससेन्ट पाउने कम्पनीले जनाएको छ।
यस अवसरमा हुन्डाईका कारहरुमा ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भि्सिङका साथै निःशुल्क सडक कर र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने बताइएको छ। यो योजना भादौ ८ गते देखि कार्तिक २६ गतेसम्म लागु हुनेछ। त्यस्तै नाडा शो भरी गाडी अर्डर कुलप्याड मोवाइल प्रप्त गर्नेछन्
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १४, २०७४, ०३:३९:१८